Ny làlan'ny landy | Vaovao momba ny dia
Ny làlan'ny landy
Mariela Carril | | soso-kevitra, Tsangatsangana
La Lalan'ny silaka Izy io dia iray amin'ireo làlana malaza indrindra amin'ny tantara, ny mpampifandray lehibe an'izao tontolo izao fantatra hatramin'ny taonjato maro. A tamba-jotra amin'ny lalana, làlam-barotra mihoatra ny lalana tokana sy be dia be izay niafara tamin'ny fampifandraisana an'i Azia, Moyen Orient, ary Eropa miaraka amin'ny fihoaram-pefy eo amin'ny zana-tany indianina sy Russia.
Na dia nantsoina hoe làlana landy aza io Tsy ny landy ihany fa ny zava-manitra, siramamy, seramika, dite, sira, ivoara, volombava ary firavaka no namidy, ohatra. Ny marina dia tsy ny zavatra ihany fa ny kolontsaina, ny hevitra, ny fiteny, ny fivavahana ary koa ny aretina mandeha, noho izany dia misy lanjany lehibe eo amin'ny tantara.
1 Ny làlan'ny landy
2 Ny làlan'ny landy anio
Ny lalana dia tsy nanana an'io anarana io foana, raha ny tena izy dia tsy nanana anarana ireo lalana samihafa raha tsy tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nomen'ny geology alemana Ferdinand von Richthofen an'io toy ny Silk Road hipoitra nanomboka teo ny fomba sy kolontsaina tsy fantatra.
Ny landy dia vokatra taloha avy any Sina ary tombanana fa nanomboka novokarina teo amin'ny 2.700 taona talohan'i Kristy.Koa vokatra tsara dia tsara izy io, tao amin'ny fitsarana empira ihany no nampiasaina ary nandritra ny an'arivony taona maro ny fizotran'ny famelabelarany dia tsiambaratelo izay tsy tokony hiala amin'ny fanjakana. Sina dia nanana ampihimamba iray fa landy dia nitety an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny diplaomaty sy ny varotra, ary tamin'ny taonjato XNUMX talohan'i JK dia tonga tany amin'ny Fanjakana Romanina izy io ho vokatra vahiny lafo vidy.
Landy niditra tao Eropa ary nanome tosika ny fampandrosoana ny lalam-barotra avy amin'ity kaontinanta ity hatrany amin'ny Farany Atsinanana. Farany dia tafaporitsaka ny fahalalana momba ny fanamboarana landy ary nanomboka novokarina tany India, Japon, ny Fanjakana Persiana ary farany, tany Andrefana, tamin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'i Kristy. Ny làlan'ny landy dia nanjary iray amin'ireo làlana malaza sy malaza indrindra tamin'ny Moyen Orient ary efa be mpampiasa hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ireo làlana samihafa izay namorona ny Lasoà Silk dia nivoatra arakaraka ny fandehan'ny fotoana sy ny tanana ny toe-draharaha politika any amin'ny faritany, ary koa noho ny fiovan'ny vanim-potoana ny tany. Mety hisy hieritreritra fa terrestrial ihany ilay lalana fa tsia, koa nanan-kery an-dranomasina tena zava-dehibe, indrindra amin'ny varotra zava-manitra toy ny kanelina, sakamalao, dipoavatra na nutmeg avy amin'ilay antsoina hoe Nosy Spice, ny Moluccas.
Ireo zotram-pitaterana an-dranomasina ireo dia tena mbola antitra aza, efa an'arivony taona maro, satria nampifandraisin'izy ireo teo aloha ny Mesopotamia, ny Saikinosin'i Arabia ary ny Lohasahan'ny Indus, ka tamin'ny Moyen Âge dia nihanitombo tokoa ireo lalana niaraka tamin'ny fandrosoana tamin'ny teknika fitetezana sy astronomia. Ka araka ny hitanao misy lalana isan-karazany azon'ny mpivarotra entina sy entana maro karazana hatakalo.
Ny làlan'ny landy dia teo a lalana mahery, mavitrika ary manankarena ho an'ny olona rehetra manerantany. Izany dia tsapan'ireo arkeolojista sy mpahay jeografia eropeana tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nanomboka nanara-dia azy, maniry fatratra ny hahita zava-baovao. Ary noho izany dia nahita tanàna, tsangambato, rava ary zava-miafina izay mbola mahasarika antsika mandraka androany izy ireo.
Ny làlan'ny landy anio
Amin'izao androntsika izao, maro amin'ireo tranobe manan-tantara sy tsangambato ireo no mbola mijoro ary misy fomba maro hanatonana azy. Ny sasany amin'ireo lalam-piaramanidina Silk Road mahaliana indrindra dia manomboka any Beijing ary mifarana any Tashkent, Ozbekistan. Ny sasany miampita ny sakan'ny Sina ary mamaky an'i Kyrgystan ka mifantoka amin'izay Azia afovoany, ho an'ny faritra maro mahaliana sy mahaliana, misy fahasamihafana ara-kolontsaina maro.
Misy làlana atoro anao atomboka amin'ny KazakstanAo an-drenivohitra antsoina hoe Almaty, afaka mandeha any ianao amin'ny alàlan'ny fiaramanidina avy any Beijing. Tsy i Almaty na i Kazakhstan no manana ody maro ao aminy, fa ny marina dia avy eto dia mora kokoa ny mahafantatra ny tsara indrindra ao Kyrgyzstan. Andro fitsangatsanganana iray andro dia hahita havoana sy mena ianao Charyn Canyon, mitovy amin'ny Grand Canyon malaza any Colorado.
eto miampita any Kyrgyzstan ianao Ary mety tsy izany irery no fiampitana sisintany, mazava ho azy, alohan'ny handehanana amin'ilay zotra, ilaina ny manamarina hoe iza avy ireo firenena mangataka visa amintsika. Kyrgyzstan dia tany maintso, misy lohasaha sy farihy Alpine ary tendrombohitra rakotra lanezy mandrakizay. Tsy fantatra sy tsara tarehy, feno soavaly, voromahery sy toby voaofana mba hijanona mandritra ny alina ary hahatsapa amin'ny tontolo hafa.
Ity koa dia a tany tonga lafatra ho an'ny fitsangatsanganaMandehandeha eny afovoan-tendrombohitra ianao, eny an-tsahan'ireo voninkazo dia sy lohasaha nosoratan'ny glaciers taloha indraindray nefa tsy mahita olona mandritra ny ora maro. Misy ny làlana efa vita an-tsarintany ary ny safidy dia eo anelanelan'ny làlan'ny antsasak'adiny sy ny lalana maharitra adiny valo, an-tongotra na amin'ny fiara 4 x 4, miaraka amina mpitari-dalana iray hatrany.
Avy amin'ny renivohitr'i Kyrgyzstan, Bishkek, dia mandray sidina mankany Tashkent ianao, ao Uzbekistan, toerana izay tsy mitovy amin'ny jeografika amin'ny tany ilaozanao ary lasa efitra. Tashkent no tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritra sy renivohitra, ary koa izy io Hub ny fifandraisana any Azia afovoany. Mpizahatany maro no manakarama ny fitsidihan'ny Silk Road eto 21 andro lava manomboka amin'ny sidina mankany Beijing.
Ireo karazana fitsangantsanganana ireo dia mandalo Dunhuang, Turpan, Kashgar, Tash Rabat, Song Kol, Bishkek, Samarkand, Bukhara ary Khiva hiverina any Tashkent amin'ny faha-21. Ahoana ny hevitrao? Ho an'ny mpandeha maro dia toa firenena mandroso kokoa noho i Kyrgyzstan i Uzbekistan, miaraka amin'ny jiro bebe kokoa ao afovoan-tanàna, faritra misy mpandeha an-tongotra bebe kokoa, fiainana amin'ny alina. Ary io, ny renivohitra farafaharatsiny dia tanàna lehibe, misy moske, kianja malalaka ary toerana toa an'i Khiva, Bukhara na Samarkand.
Raha tsy te hisoratra anarana amin'ny fitsangatsanganana mitondra anao any Beijing ianao dia afaka foana mitsangatsangana avy any Tashkent toy ny fandraisana a lamasinina mankany Samarkand ary mitete amin'ireo toerana manintona azy manerana ny tanàna: ny Moskea Bibi Khanym, izay lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ny kianja Registan tsara tarehy sy feno majolica, ny madrasas, ny Mausoleum of Tamerlane, ny tanàna taloha ary ny toerana arkeolojika ao Marakanda, tanàna iray resin'ny Makedoniana roa arivo taona lasa izay.
Avy any Samarkanda dia azonao atao koa mankanesa any Bukhara ary mitsidika ny trano mimanda El Arco izay namonoana ireo iraka britanika. Ny tanàna iray manontolo dia tsara tarehy, mangina kokoa noho Samarkand ary kely kokoa. Fiara adiny iray avy any Bukhara dia manana ny sisin-tany miaraka amin'i Turkmmen ianao, fiampitana adiny roa ary adiny efatra hafa ary miditra ianao Merv amin'ny fotoana hatoriana ary manomboka fitsangatsanganana ny andro manaraka.
Merv dia tao anatin'ny làlan'ny landy Ary amin'ny lafiny iray dia toa mijery ny endrik'i Ozbekistan raha tsy misy ny fanampiana Sovietika. Zara raha misy mpizahatany noho izany dia mahatsapa tena manokana. Adiny efatra amin'ny fiara no ahatongavanao aty an-drenivohitra, Ashgabat, tanàna manana ny maha izy azy, tranobe marbra ary sarivongana volamena mihodina mandrakizay hiatrika ny masoandro. Tanàna iray hijerena, indrindra ny Quarter Rosiana taloha.
Avy eo ianao dia afaka mahafantatra ny Kawahin'i Desert Darvaza, mbola nirehitra nanomboka tamin'ny taona 70 tany ho any raha niniana natao izy ireo. Io no traikefa nahafinaritra tsy azonao adino satria mijanona mandritra ny alina ao amin'ny toby iray akaikin'ny vava-vava volkano ianao. Ny ampitso amin'ny fiara mandeha no andehananao hatrany amin'ny sisintany miaraka amin'i Ozbekistan ary fantatrao i Kunya - maika miaraka amin'ireo moskea, trano mimanda ary minareta tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Rehefa avy niampita ny sisintany misy fiara antsasak'adiny mankany Nukus ary avy eto ianao dia mahazo mankany Elliq - Qalas, tranobe misy vatosokay izay toa tsy hita na aiza na aiza ary ampahany amin'ny lova navelan'i Alexander ilay Lehibe. Manaraka azy ny tanànan'i Khiva miaraka amin'ny moskea sy ny manodidina mahazatra, misy majolica manga na aiza na aiza. Ary eny, amin'ity teboka ity dia azonao atao mandray sidina ary miverina any Tashkent izay no nanombohanao ny dia.
Araka ny hitanao, tsy isalasalana Ity zotra ity manamorona ny làla landy taloha no iray amin'ireo lehibe indrindra vahiny. Ary araka ny hitanao, na azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fitsidihana na afaka manofa fiara ianao ary mivezivezy amin'ireo tanàna rehetra ireo, indraindray mitaky fanofana mpitari-dalana na mpamily tsy miankina. Dia a faritra midadasika, na izany aza, ka tsara kokoa ny mitsidika azy eo anelanelan'ny volana aprily sy ny fiandohan'ny volana jona na septambra ary oktobra. Mafana ny andro nefa tsy mafana be.
Ny làlana dia mitaky fiara mandritra ny ora maro, sidina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina ary fitsangatsanganana an-dalamby sasany, ao Ouzbékistan ary farany, fa tsy izany ihany fa tsara ny mandeha miaraka amin'ny kitapo ary tsy miaraka amin'ny valizy satria mandeha an-tongotra ny fiampitana sisintany. Iray amin'ireo làlana mety hitranga io ary mety tsy tianao ny hiroso amin'ny Adventure fotsiny, fa ny tiako holazaina dia hoe azo atao izany. Ny zavatra roa dia azo atao: mitsangatsangana amin'ny làlan'ny landy na manao dia amin'ny dianao. Misafidy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Ny làlan'ny landy
Inona no ho hita ao Valderrobres